Registry First Aid Platinum 10.0.0 build 2277 Full - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Computer software Utilities Registry First Aid Platinum 10.0.0 build 2277 Full
Maung Pauk at 11:46:00 AM Computer software, Utilities,
Windows Computer ရဲ့ System ဖိုင်တွေထဲမှာ Registry ဟာ အရေးအပါဆုံးဖြစ်ပါတယ်.. Registry ဖိုင်တွေ ပုံမှန်မဟုတ်တော့တဲ့အခါ၊ ပြောင်းလဲ ပျက်စီးလာတဲ့အခါ၊ မလိုအပ်တဲ့ Registry တွေဝင်ရောက်လာတဲ့အခါ ကွန်ပျူတာဟာ ဒုက္ခတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ ကြုံလာတတ်ပါတယ်.. ဒီလို ဒုက္ခ ပြဿနာတွေ မဖြစ်ပွားအောင်၊ ဖြစ်ပွားနေတာတွေကို ပြန်လည်ကုစားပြီး တည်ငြိမ်၊ ကောင်းမွန်တဲ့ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးဖြစ်အောင် Registry First Aid က တော်တော် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်.. ခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Platinum 10.0.0 build 2277 ဟာ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့ Feature များစွာပါဝင်လာပြီး မိတ်ဆွေရဲ့ PC ကို စိတ်ချမ်းသာစေပါလိမ့်မယ်..
Home Page : http://www.rosecitysoftware.com/reg1aid/
1. Setup ကို Run ပါ.. အင်တာနက်ပိတ်ပါ.
2. Shortcut icon ကိုညာကလစ်ထောက်ပြီး Open File Location ကိုနှိပ်ပါ.. ဒေါင်းလို့ရထားတဲ့ Crack ဖိုင်ထဲက ကိုယ့် Windows နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ key.ini ကို Copy ကူးပြီး ဒီထဲကို Paste လုပ်ပါ..
3. ကိုယ့် Windows နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ reg1aid.exe ကို Run လိုက်ပါ...
Registry First Aid Platinum 10.0.0 build 2277 Setup : 7.2 Mb
Crack : 2.38 Mb